University of Lincoln - Kudzidza in United Kingdom. Education kunze Kwenyika
nyika : United Kingdom
guta : Lincoln
inotangwa : 1992
Musakanganwa kuti kurukura University of Lincoln
Kunyoresa pana University of Lincoln
Rimwe remaguta makuru historiallinen kwenyika, Lincoln inzvimbo mapurani yekare blends pamwe miganhu chete chipenyu ano.
The University of Lincoln kembasi inowanikwa mumwoyo guta riri Brayford building. Mhiri Marina, achitevedza Brayford building, Continental kwemanyorero cafes vanowanikwa yakatarisana mvura.
Mere kwemaminitsi’ famba kure, guta centre nzvimbo Lincoln mubatanidzwa kare uye itsva, apo Tudor zvokufara tii makamuri kugunzva kunorwa bistros ano. Panguva pamusoro Lincoln kuti kumawere Hill ndiro guta racho rekare kota, kumusha chiuru makore Cathedral uye Ages Castle. Independent mabhizimisi zvinozadzisa mumigwagwa yaro cobbled, kusanganisira unyanzvi namaberere, delicatessens, zvaunganidzwa boutiques uye antiikki bhuku zvitoro.
The Fusion kare uye itsva, yekare uye wepanguva, anoita Lincoln nzvimbo inonakidza kurarama uye kudzidza.
Top Zvikonzero Kusarudza Lincoln
University inzvimbo kudzidza uye uyewo nzvimbo kutanga upenyu zvakaitika nokusika zvinokosha kuyeuka. Zviri mukana pavakaziva nezvido zvako kuvaka chivimbo pakugadzirira wakabudirira ramangwana.
Pane zvimwe zvinhu zvikuru kuenda mberi paUniversity of Lincoln. Ndiyo nzvimbo tarenda kurarama uye vadzidze uye sezvo kutanga dzidzo yako yepamusorosoro zvedzidzo ruzivo zvichagara rakaoma, inonakidza uye transformative. Tsvaka zvimwe pazasi zvikonzero zvikuru kusarudza Lincoln.
Ita ichi gore hunochinja upenyu hwako.
The University of Lincoln kwave vakarumbidzwa Quality Assurance Agency ayo vataure pakugonesa vadzidzi’ mikana yekudzidza
Chris Packham, mumwe kushanyira kwedu mapurofesa rinotsanangura University of Lincoln sezvo “inonakidza uye staffed kubudikidza itsva vanhu.”
Kugutsikana High Student
The University of Lincoln ane mamwe kugutsikana vadzidzi muUK. Lincoln ari pamusoro rechitatu munyika nokuda mudzidzi kugutsikana sezvo yandaipuwa nokuda kwedu vadzidzi, inobva paavhareji zvibodzwa nokuda mibvunzo zvose vari National Student Survey 2015. Vanoverengeka yemazuva edu pakuva pamusoro 20% munyika muna NSS 2015, edu Psychology Courses chepamusoro 1st munyika yedu Design Courses chepamusoro 3rd.
Excellent Employment Inofadza
Mapfumbamwe kubva gumi redu zvikuru zvichangobva kudzidza vaiva nebasa kana mimwe kudzidza mwedzi mitanhatu pashure pokupedza kosi yavo, vaviri pavatatu munyika akapedza dhigiri mabasa. Lincoln pokutanga pamusoro 20 nokuti payunivhesiti tarisiro munyika dzinoverengeka pasi nzvimbo The Times uye Sunday Times Good University Guide 2016.
Nakisisa City Centre Location
Rakamiswa pedyo picturesque Brayford Pool Marina mukati mumwoyo kubudirira peguta, maminitsi mashoma 'vanofamba kubva High Street, pane pfuma muzvitoro, Restaurants uye pekugara pedyo kembasi. The University of Lincoln akanga yavose sezvavakatarirwa pamusoro 10% pamusoro UK mumayunivhesiti nokuda centralized, yakakunakira zvivako zviri Times yepamusoro kwaiitwa Student Experience Survey 2015.
Lincoln vanodada kuti musha nevaongorori nyika-kutungamirira vari kuita zvikuru mipiro yavo nezvenyaya idzi. Zvakatsvakurudzwa tikwanise kuziva, zvinozivisa uye tichengetedze ruzivo. Vanopfuura hafu kutsvakurudza pasi pedyo Lincoln kumarudzi Research Excellence Pakuumbwa (neMuridzi) 2014 akatongwa kuva pose wakanakisisa kana nyika-kutungamirira (3* kana 4*) --Soro hwakawanda zvinobvira.
Tava yashandiswa kupfuura £ 200 miriyoni vari kembasi hwedu imwe £ mamiriyoni 130 vanopedza akaronga mumakore gumi akatevera.
Our Brayford Pool kembasi ane zvivako akagadzirirwa penyaya-chaizvo zvinodiwa zvedu vadzidzi. Editing uye kutsikisa Inn, indasitiri-mureza inogadzirwa zvivako, Studios ano uye vakanyatsoshongedzwa Mumusangano anowanikwa avo kudzidza unyanzvi-kwakavakirwa vanotongwa, apo vadzidzi engineering kadambari kuwana mumarabhoritari, okudhindira uye ichangobva midziyo rwokugadzira. Science vadzidzi kuwana nyanzvi midziyo uye nokuveza-mupendero mumarabhoritari panguva yedu Science uye Innovation Park.
Yakasiyana Employer Links
The University of Lincoln azivikanwa zvakaisvonaka pakudzidzisa uye kudzidza kuburikidza yaro kupayona nzira kushanda indasitiri. Ukama hwedu nemamwe mapoka akadai Siemens uye muLincolnshire Co-op tichiratidza dzaungagona indasitiri-kuroorana kusvika. Izvi kwave kubvumwa kuburikidza Ishe Stafford Award uye Times Higher Education Award.
Great Visiting Pfungwa
Pamwe nyika yedu-kirasi emushandi, vamwe wakanakisisa nevafungi muminda yavo vanouya Lincoln kuti anunure kurudziro hurukuro yedu vadzidzi senzira Pfungwa dzedu Great kushanyira lecturers chirongwa. Past vakurukuri dzinosanganisira John Hurt, Chris Packham, Jason Bradbury, Dallas Campbell, Abbie Hutty, John Bercow MP, Dame Carol Ann Duffy, Steve inopedzisira yaparara, Angela Rippon, Purofesa Ishe Robert Winston uye Carl Djerassi.
Lincoln ari Great Visitor Destination
Lincoln azivikanwa somumwe maguta makuru historiallinen kwenyika, yokukwezva mazana ezviuru zvevashanyi gore negore pamusoro nyika kubva zvose. With zvayo Ages Castle uye mumwe wakanakisisa machechi muEurope, Lincoln rakakosha munhau.
Lincoln rave ainzi somumwe Britain 20 Best Cities in 2016 nokuda Telegraph. Lincoln wakakurumbira cobbled kumawere Hill akanga anonziwo mumwe akanakisisa migwagwa muBritain pedyo Daily Telegraph, sezvo zvamboshandiswa ainzi Britain Best Street kubudikidza Academy of Urbanism.
The College of Arts inozviita kutsvakurudza, uye ane zvakawanda Rokutenderwa uye dhigirii madhigirii. The kukoreji zvakare kumusha sairini FM, nzanga yeredhiyo inobva kuyunivhesiti iyo dzeredhiyo kuguta Lincoln pamusoro 107.3 FM uye website yayo.
School of Architecture & patani
The chikoro kunobva mukati Art, Architecture uye Design Building.
School of Chirungu & kutapa nokunyora nhau
The School of Chirungu & Nhau iri abvumirwa nokuda BJTC, kuiita munyika vakaziva nzira pakati achitungamirira broadcasters, kusanganisira BBC, ITV, mugero 4 andSky News. The School kwakaita tsvakurudzo Profile zvinosanganisira unyanzvi muna Shakespeare uye vaairarama, ari Victorian kutekenyedzwa yokufungidzira, 21there Century ingano, vakadzi nhau, uye rugare nhau.
The School of Film & Media chakabereka mukurumbira simba sungano pamatafura ayo BA uye MA Media Production madhigirii. It achangobva upgraded rayo terevhizheni Studios yakakwirira tsananguro uye The Lincoln Sound Theatre yakavhurwa 2010 kuburikidza yekushanyirana Professor Trevor Dann. Recently ari BA Hons Audio Production kosi vaakagamuchira JAMES Accreditation (Joint Audio Media Education Support).
Lincoln musha chikuru muzinda kuchengetedza uye kudzorerwa kudzidza muUK. The chikoro zvakare kumusha Crick Smith, yeYunivhesiti kuchengetedza Consultancy iyo inozviita zvirongwa nemakasitoma kusanganisira Historic Royal nhare uye Victoria uye Albert Museum.
The School of Computer Science chinobatanidza zvakawanda mune kadambari michina uye ruzivo nehurongwa, kusanganisira specialisms vari robotics uye zvionera nehurongwa, zvakaratidzwa kombiyuta uye mufananidzo mapurani, dzokurapa mafomu zvigadzirwa, mumagariro kadambari, mitambo kadambari, nemagariro kadambari bhizimusi kadambari.
buri 2011, vari kubatsirana pamwe Siemens, Chikoro pakati Engineering akava michina chikoro wokutanga akasikwa ari UK kweanopfuura 20 makore. The School iri muNzvimbo chinangwa-akavaka Engineering Hub, ichi chivako chine Rokutenderwa uye dhigirii mharidzo dzemitambo, semina makamuri, kudzidzisa uye chirongwa mumarabhoritari. Pamusoro pe, tsvakurudzo mumarabhoritari, injini uye gasi turbine nekuongororwa zvivako uye muzvidzidzo.
chivako, rikagadzirwa London Architects dzairwisa uye Morrison zvichikonzerwa refu akamira pakubatsirana nesimba pakati University of Lincoln uye Siemens Industrial Turbomachinery Lincoln. Siemens kunge mushandirapamwe iri yavo Zvivako chigadzirwa chokurovedza tsika akagadzirirwa munzvimbo mukati vakai, izvi cemented kwamadzimai Siemens uye University of Lincoln vose pakudzidzisa uye kutsvakurudza muminda engineering zhinji.
The School wemasvomhu uye Physics ndiye ichangoburwa zvedzidzo chikoro kubatana University of Lincoln. Wemasvomhu makosi mukati chikoro vave abvumirwa kubudikidza Institute of masvomhu uye zvayo Applications uye wefizikisi makosi vari kuzivikanwa Institute of Physics muna April 2016.
The School of Pharmacy rine BSc Pharmaceutical Sciences, MPharm chirongwa uye zvakawanda dhigirii tsvakurudzo mikana. The yechikoro muNzvimbo Joseph Banks Laboratories. Tenzi Pharmacy (MPharm) progamme ari provisionally abvumirwa neDare General Pharmaceutical Council.
National Centre nokuti Food Manufacturing
The Lincoln Institute for Health (LIH) ndiyo yunivhesiti-paupamhi multidisciplinary tsvakurudzo kubatsirana Linking zvikoro, mumakoreji uye kwokunze vadyidzani kuferefeta dzakakosha hanya utano, munzanga neraramo hwakanaka vachishandisa 'muchitokisi kuti vemunharaunda' kusvika.
The College of Social Science ndiro rakakura kupfuura mamwe ose College payunivhesiti pamwe siyana kudzidzisa zvokutsvakurudza zvido.
The School of Health & Social Care musha-siyana nenyanzvi abvumirwa makosi ukoti uye munzanga basa uyewo yaro vocationally akatarisa Health uye Social Care dhigirii. The School zvakare kumusha Professional Development Centre iyo inopa nyanzvi kukura zvirongwa, Consultancy kuzvipatara uye pakubatsirana Zvakarurama tsvakurudzo.
Mutemo School ari vibran zvedzidzo munharaunda iro rinobatanidza yepamusoro dzidziso, kunoshamisa tsvakurudza uye muzvimwe zvinoitwa.
The School of Psychology inopa nzira dzakasiyana-siyana zvose Rokutenderwa uye dhigirii zvirongwa. The BSc Psychology kosi ari abvumirwa neDare British Psychological Society.
Rinotaura zvakawanda nokuranga, kusanganisira kwemhosva, zvematongerwo enyika, International Relations, Wemagariro evanhu uye Social Policy. Kubva mukati meimba Bridge House.
The University of Lincoln yakatanga kubva anoverengeka masangano dzidzo munyika Hull kusanganisira Hull School of Art (1861), ari Hull Technical Institute (1893), yeRoma mudzidzisi-Kurovedza Endsleigh College (1905), ari Hull Central College of Commerce (1930), uye Kingston pamusoro Hull College of Education (1913). masangano aya akabatanidzwa ari 1976 kuumba Hull College Yepamusoro Education, aine kuchinja zita kuti Humberside College Yepamusoro Education mu 1983 kana takabatikana makosi akawanda mune hove, chikafu uye pakugadzira vachishandisa Grimsby.
mu 1992 zvakanga mumwe zhinji masangano ari UK kuva zvizere mumayunivhesiti sezvo, zvishoma, ari University of Humberside, kukura 13,000 vadzidzi kubudikidza 1993.
The Church Guta Lincoln rakanga pasina pachavo yunivhesiti yacho, saka University of Humberside akavingwa kuva kembasi itsva rwezasi rwamavirazuva rweguta centre, yakatarisana Brayford Pool. The yunivhesiti Yakazopiwa zita rokuti University of muLincolnshire uye Humberside muna January 1996, uchiwana yaro yokutanga 500 Lincoln vadzidzi September 1996, takananga kukura kusvika munenge 4,000 Lincoln kwakavakirwa vadzidzi mumakore mana.
Nomumwe kuchinja zita kuna University of Lincoln muna October 2001, mumwe kembasi itsva yakavakwa Lincoln. Yunivhesiti vakatamira huru kembasi wayo kubva Hull kuna Lincoln muna 2002.
Rakazaruka Queen Elizabeth II, yeYunivhesiti huru kembasi muna Lincoln aiva wokutanga idzva peguta kembasi ichavakirwa muUK kwemakumi emakore. Kupfuura £ mamiriyoni 150 kwave paakapiwa muna Brayford Pool pazvivako, kuchinja guta centre brownfield paIndaneti, unotipa simba nzvimbo uye yokukwezva mari kubva chitoro, yokufaranuka uye pfuma sectors. Nezvoupfumi vanofungidzira kuti yunivhesiti akasika kanenge 3,000 mabasa matsva mukati Lincoln uye kuti zvinowanisa kupfuura £ mamiriyoni 250 gore negore yokwaanogara upfumi - doubling yapfuura omunharaunda zvoupfumi kukura prices.
The nenzvimbo raisanganisira University of Lincoln kwokuwana Leicester anotsanangura zvikoro De Montfort University muna muLincolnshire: ari Lincoln School of Art uye Design mune pamukwidza Lincoln, uye muLincolnshire School nzvimbo Agriculture pana Riseholme, Caythorpe uye Holbeach. Caythorpe akazoonana yakavharwa zvachose uye mabasa ayo vakatamira Riseholme. Courses rakaitirwa Grimsby vakanga vatamira Lincoln kumativi nguva ino.
mu 2012 zvose Uyezve Education gadziriro hwakatamiswa kubva Riseholme a Bishop Burton College. zvino Bishop Burton College vane mutoro Riseholme College kuchamhembe kweguta.
Mumazana mushakabvu-kuma1990, nzvimbo yunivhesiti muna Hull vakanga dzinokwanisa scaled pasi sezvo pfungwa zvava akananga Lincoln. mu 2001 izvi akanga atora danho apo chisarudzo chakaitwa kutama kumuzinda administrative uye kutarisirwa kuna Lincoln uye kutengesa Cottingham Road pazvivako muna Hull, aimbova huru pazvivako, kuti muvakidzani wayo, Yunivhesiti Hull; nzvimbo yacho zvino kumba Hull York Medical School. kusvikira 2012 yunivhesiti yakaramba kembasi duku, Derek Crothall ari Building, muna Hull peguta. A maduku kembasi uye mudzidzi dzimba musi Beverley Road, Hull, vakanga kutengeswa redevelopment.
On 28 Gumiguru 2004, kutevera redevelopment kwayo sezvo nyanzvi chikafu sayenzi Michina Park, National Centre Zvokudya Manufacturing pana Holbeach yakavhurwazve naJohane Hayes, nhengo yeparamende nokuda South Holland uye Deepings.
Unoda kurukura University of Lincoln ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of Lincoln musi Map
Photos: University of Lincoln pamutemo Facebook
University of Lincoln wongororo
Join kukurukura pamusoro University of Lincoln.
Other mumayunivhesiti mune United Kingdom
University of Vancouver Guildford
University of Reading kuverenga